Njengoba amabhulogi amaningi namawebhusayithi eshicilelwa nsuku zonke, okukhathazeka kakhulu ukwebiwa kwezithombe ozithengile noma ozidalelile ukuzisebenzisela wena noma ubuchwepheshe. TinEye, injini yokusesha ebuyisela emuva, inika abasebenzisi ikhono lokusesha i-url ethile yezithombe, lapho ungabona khona ukuthi izithombe zitholakale kangaki kuwebhu nokuthi zisetshenziswe kuphi.
Uma uthenge isithombe sesitoko emithonjeni efana nomxhasi wethu Depositphotos, noma iStockphoto or Getty Images, lezo zithombe zingavela neminye imiphumela. Kodwa-ke, uma uthathe isithombe noma wenza isithombe esithunyelwe ku-intanethi, ungumnikazi walesi sithombe.
Uma unganiki ngokucacile umsebenzisi imvume yokusebenzisa izithombe zakho noma bengasho isithombe sakho uma usithumele ezindaweni ezifana Creative Commons, lapho-ke unelungelo lokubathathela izinyathelo zomthetho labo bantu.
Ezinye zezici ezinhle ze TinEye zihlanganisa:
Izinkomba izithombe nsuku zonke zemiphumela engcono yokusesha, cishe 2 billion kuze kube manje
Inikeza a i-API yezentengiso ongakwazi ukuyihlanganisa nokuphela kwangemuva kwesiza sakho
Izipesheli ama-plugin ngeziphequluli eziningi zokusesha okulula
Ngokubanzi, TinEye kwenza kube lula ngabantu ngabanye ukuvikela izithombe zabo nempahla ye-elektroniki. Qiniseka ukuthi ukhomba izithombe okungezakho noma ozenzile futhi ubike lezo ezebiwe.
Tags: ukusesha kwesithombeinjini yokusesha yesithombebuyisa ukucinga kwesithombetineye
May 19, 2011 ku-1: 02 PM
Abanikazi bamabhizinisi amancane nabakhi bewebhu abayizintshisekelo bavame ukwenza iphutha lokucabanga ukuthi isithombe simahhala ngoba nje basithole kuwebhu. Akunjalo nezinhlelo ezifana neTinEye ezisiza abathwebuli bezithombe ukuthi bazivikele ekusetshenzisweni okungagunyaziwe kwezithombe zabo, kungalimaza nosomabhizinisi abancane abangaqaphile bengazi ukuthi basebenzisa “isithombe esilawulwa ngamalungelo” kuze kwephuze kakhulu.
Isixazululo sethu, namathela kuzithombe zoqobo, noma imithombo efana ne-iStock ne-Photos.com